Fiaraha-mientana :: Mitaky an’ireo « Îles éparses » ny Antenimieram-pirenena • AoRaha
Fiaraha-mientana Mitaky an’ireo « Îles éparses » ny Antenimieram-pirenena
Mitsipaka marindrano ny fikasan’i Frantsa hametraka tahirin-javaboahary ao amin’ny nosy Sambatra, iray amin’ireo nosy kely efatra manodidina an’i Madagasikara na ny « Îles éparses » ireo solombavambahoaka. Miombon-kevitra tanteraka amin’ny fitondram-panjakana malagasy, tarihin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, amin’ny fitakiana an’ireo nosy kely ireo any amin’ny fitondrana frantsay ihany koa ny solombavambahoakan’i Madagasikara, araka ny nambaran’izy ireo tetsy amin’ny Ivon-toeram-pivoriana iraisam-pirenena (CCI) Ivato, afak’omaly.
Miantso ny ankolafy frantsay, ny Vondrona Afrikana, ny Vondrona ara-barotr’ireo firenena aty Afrika Atsimo (SADC) sy ny hafa mba hiaraka hikaroka vahaolana manoloana izao disadisa, miendrika fanjanahantany ankolaka, izao ry zareo.
« Fanapahan-kevitra lalantokana, tsy niarahana nidinika tamin’ny fitondram-panjakana malagasy no raisin’ny fanjakana frantsay, ankehitriny. Tsy hanaiky mora foana izahay mpitondra tenin’ny vahoaka », hoy Razanamahasoa Christine, filohan’ny Antenimieram-pirenena teny Ivato.
Sokajian’ireo depiote ho zava-dehibe ny famerenana an’ireo nosy kely manodidina an’i Madagasikara ireo amin’ny Malagasy, indrindra amin’izao ankatoky ny fitsingerenan’ny faha-60 taonan’ny Fahaleovantena izao. « Tsy misy fahaleovantena marina raha mbola giazana tahaka izao ny tanintsika », hoy hatrany ny filohan’ ny Antenimieram-pirenena.
Tsy fantatra na fifandrifian-javatra na fihantsiana na fanehoan-kery hatrany ny fihetsiketsehana ataon’ireo miaramila frantsay tao amin’ny nosy « Juan de Nova », tamin’ity herinandro ity. Nigadona tampoka tao amin’ny seranam-piaramanidina any AmborovyMahajanga ny fiaramanidin’ny tafika frantsay mitondra ny laharana CTM 1150, tamin’ny 19 mey lasa teo, tokony ho tamin’ny 9 ora sy 25 minitra maraina.
Nitondra miaramila frantsay miisa roapolo avy any amin’ny nosikely « Juan de Nova » io fiaramanidina io, izay nilazana fa nipetraka tao Mahajanga noho ny antony teknika. Ny ampitson’ny fampiantsoan’ny minisiteran’ny Raharahambahiny malagasy ny lehiben’ny masoivohon’ny Frantsa eto Madagasikara no nisian’izany fiantsonana tampoka nataon’ny Tafika frantsay, tany Mahajanga, izany.
Tsy niala tao amin’ny seranam-piaramanidina ireo miaramila frantsay nandritra ny fiantsonana, araka ny loharanom-baovao. Niala tao Amborovy ary nilaza ny hihazo ny nosy La Réunion io fiaramanidina io, tokony tamin’ny 10 ora sy 16 minitra.
Ady amin’ny coronavirus :: Hiara-hiasa momba ny tambavy CVO ny OMS sy i Madagasikara
Valanaretina sy famoaham-baovao :: Torohan’ireo Eveka katôlika ny fampiasan-diso ny tambajotran-tserasera